Baruulleen Yeroo Jalqabaatiif mata duree “Dhangaa Lubbuu” jedhuun maxxanfame Galma Waldaa qulqullootaa keessatti Eebbifame – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
June 23, 2015 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Qabiyyee fi qophii baruulee kanaa irraatti yaadnii fi qeeqni kennamee jira. Hirmaattota keessaas yaadnii fi gaaffileen dhiyaatanii kutaa qophii kanaatiin deebiin itti kennamee jira.
Qabiyyee fi qophii baruullee kanaa irratti yaada isaanii kan kennan Obbo Faantaahun Waaqee “Dhimma Afaaniin barsiisuu akka salphaatti Ilaaluu hin qabnu; dhimmicha cimsinee Ilaaluu Qabna; Waaqayyo jalqaba Addaam fi Heewaaniin Uume. Garuu waan ajaja Waaqayyoo hin eegneef Addaamii fi Heewaan Jannata Keessaa ari’amani.
Boodarras Qaayeenii fi Abeeliin dhalani. Garuu Abeelii fi Qaayeen Maatii tokko irraa dhalatanii afaan tokko dubbatanis eenyummaa gara garaa waan qabaataniif waliigaluu dadhabanii jiru.Dhimmi eenyummaa hangana gadi fagoodha kan jedhan Obbo Faantaahun, Waaqayyos Addunyaa bade kana deebisuuf Abrahaamii fi Raajota kaase. Boodarras Sanyii Haaraan akka dhalatu taassisee jira.
Sanyiin haaraan kunis Kiristaanummaadha erga jedhanii booda; afaan uummanni dhagahuun barsiisuun ammoo dhalli namaa sanyii haaraa kana irraa adda bahee akka hin banne waan taassisuuf baruulleen qophaahe kun gahee guddaa qaba; qopheessitoota baruullee kanaas Waaqayyo bu’aa hojii isaanii haa eebbisu jedhaniiru.
Hirmaattota sagantichaa gamiisa
Baruulleen kun qophaahuun isaa Seexana Ijoollee Addaam sanyii haaraa kana irraa adda baasuuf dhama’u kan qaanessudha jedhaniiru.
Itti gaafatamaan Kutaa muummee Miidiyaa maxxansaa fi Elektirooniksii Dooktar Marshaa Aallahany haasawa taassisaniin:- “Waldaan qulqullootaa kanaan dura kitaabolee fi faarfannaan Afaan Oromootiin kan qopheessaa ture” ta’uu yaaddachiisanii “Garuu rakkina bal’aa jiru irraa kan ka’e haala addaatiin pirojeektii miidiyaa afaan oromoo kana hundeessuun bal’inaan hojjechuuf carraaqqiin taassisamaa jira. Kanaafuu qaamni kam iyyuu akka dandeettii isaatti pirojeektii kanaaf deeggarsa yoo taassise saffisaan hojjechuu dandeenya” jedhaniiru.
Barreessaan Waldaa Qulqullootaa Obbo Tasfaayee Bihonany Ergaa dabarsaniin:- “Bal’ina rakkina naannoo kana jiru irraa kan ka’e Baruullee kana qopheessuu qofaan furmaata kennina jennee hin yaadnu; kan furmaatni dhufuu danda’u hundi keenya qaama furmaatichaa ta’uuf yoo carraaqne qofadha” jedhaniiru. “Rakkinni naannoo sana irratti mul’atu bal’aadha” kan jedhan obbo Tasfaayeen “Rakkoo kanaaf furmaata kennuuf nammotni muraasni qofa kan dhiphatan ta’uu hin qabu. Hundi keenya rakkina kana furuuf hirmaachuu qabna” jedhaniiru.
Gaaffilee mana keessaa ka’eef kutaan qophii baruullichaa kan deebii irratti kenne yoo ta’u, hojiileen pirojeektii kanaa qophii baruullee fi Weebsaayitii kana dabalatee miidiyaalee barruu (Baruullee fi kitaaba) Miidiyaa Elektirooniksii, miidiyaa Biroodkaastii (Raadiyoo fi Televiziyoonaa) kan hojjetu waan ta’eef tamsaasota kanaaf hunduu deeggarsa akka taassisu waamichi dhiyaatee jira.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-06-23 06:31:432018-10-26 09:21:19Baruulleen Yeroo Jalqabaatiif mata duree “Dhangaa Lubbuu” jedhuun maxxanfame Galma Waldaa qulqullootaa keessatti Eebbifame
Falaasama Humnaa Isa Haaraa Falaasama Humnaa Isa Haaraa